समसामयिक Archives - Hamrokhotang
केही दिनमै अनुहार चम्काउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी विधि
पिपलको बोट उखेन्दा पनि लाग्छ पितृ र शनि दोष
तपाई बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदै फाइदा
एजेन्सी- पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी...
मुख, ओठ र जिब्रोका खटिरा सजिलै हटाउन अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपचार
काठमाडौं । के तपाईको मुखमा साना-साना बिबिरा, फोका-फोकी आएर निकै सताएको छ ? मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठ लगायत मुखको कुना-कानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ भएकाे छ ? यस्ता घाउ खटिराकाे समस्या बढेर जटिल समस्या पनि आउन सक्छ । घाऊ ठूलो र गहिरो भएमा खान बोल्नै नहुने किसिमको...
काठमाडौं । खोटाङको दक्षिण भेगमा निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको दिक्तेल र उदयपुर जोड्ने फोक्सिङटारको पुल निर्माणका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । निर्वतमान सांसद बिशाल भट्टराईको पहलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वसन्त नेम्वाङको कार्यकक्षमा उनकै उपस्थितिमा सांसद रामकुमार राई, अर्जुन राईसहितको सर्वदलीय...
एजेन्सी । कतिपय समयमा घरको वरपर यस्ता चिज आउँछन् जसले घरलाई कुरुप बनाउँछ। पर्खाल कुरुप बनाउने मात्र होईन कमजोर पनि बनाउँछ । त्यसैले हामी घरको पर्खालमा उम्रिएका कुनै रुख बिरुवा हामी उखेलेर फाल्छौँ । हिन्दू धर्मग्रन्थ अनुसार पिपललाई निकै पवित्र विरुवा मानिन्छ। त्यसैले यसलाई उखेलेर फालेमा ठुलो पाप लाग्दछ...